Esi esi na komputa tinye foto na Instagram
Instagram bụ netwọk mmekọrịta mmadụ na-ewu ewu iji bipụtara vidiyo na foto, bụ iji jiri smartphones na-agba ọsọ iOS na usoro sistemụ arụmọrụ. N'ụzọ dị mwute, ndị mmepe adịghị enye ụdị kọmputa dị iche iche nke ga-ekwe ka iji atụmatụ niile nke Instagram mee ihe n'ụzọ zuru ezu.
Otu esi agbanwe asụsụ n'asụsụ Instagram
Instagram bụ ọrụ a na-ahụ maka ụwa nke a na-ahụkarị nke na-ejikọta ọnụ ọgụgụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, asụsụ ndị na-asụ asụsụ Instagram nwere ike gbanwere n'ụzọ dị mfe. Ịgbanwe asụsụ na Instagram Ị nwere ike iji Instagram site na kọmputa, site na ibe weebụ, na site na ngwa maka gam akporo, iOS na Windows.
Esi meghee profaịlụ Instagram
Malite Instagram. Na ala aka nri ala, mepee taabụ profaịlụ gị. N'elu aka nri, họrọ bọtịnụ menu. N'okpuru windo ahụ, mepee akụkụ "Ntọala". Na mpaghara "Nzuzo na Nche", mepee ihe "Akaụntụ Nzuzo". Bugharịa ihe mmịfe ahụ nso ka "Aka mechiri emechi" nke na-adịghị arụ ọrụ.
Ndị ọrụ Instagram na-achọkarị zoo ụfọdụ ma ọ bụ foto niile na profaịlụ netwọk mmekọrịta ha. Taa, anyị na-atụle ụzọ niile nwere ike isi mee nke a. Zoo foto na Instagram Ụzọ ndị na-esonụ dị iche, mana nke ọ bụla ga-aba uru na otu ọnọdụ. Nzọụkwụ 1: Mechie akwụkwọ ahụ Iji mee ka akwụkwọ ndị gọọmenti na akaụntụ gị weere ya naanị site n'aka ndị ọrụ ịdenye aha gị, ọ ga-ezu iji mechie ibe.
Esi weghachite ederede na Instagram
Okwuntughe - ụzọ isi chebe akaụntụ na ọrụ dị iche iche. N'ihi mgbasawanye nke profaịlụ na-aba ụba, ọtụtụ ndị ọrụ na-emepụta paswọọdụ dị mgbagwoju anya, nke dị mwute, na-echefu ngwa ngwa. A ga-atụle paswọọdụ gị na Instagram. Mgbake ozighachị bụ usoro nke ga-enye gị ohere ịtọgharịa paswọọdụ, mgbe nke ahụ onye ọrụ nwere ike ịtọ igodo nchekwa ọhụrụ.
Otu esi ewepu aha site na onye ọrụ na Instagram
Ka anyị wee ghara ileghara akwụkwọ ndị na-adọrọ mmasị anya, anyị na-edebanye aha na ha ka anyị wee nwee ike soro n'akwụkwọ nke foto ọhụrụ na ndepụta anyị. N'ihi ya, onye ọrụ Instagram ọ bụla nwere ndepụta nke ndị debanyere aha ndị nyochaa ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọghị ka onye a ma ọ bụ onye ọrụ ahụ debanye aha gị, ị nwere ike iwepụ ya na ya.
Otu esi eji Instagram
Ikekwe, na Instagram ọ bụla onye ọrụ nke ama nụrụ. Ọ bụrụ na ị malitere iji ọrụ a, n'ezie ị nwere ọtụtụ ajụjụ. Isiokwu a nwere ajụjụ ndị ọrụ kachasị ewu ewu metụtara ọrụ nke Instagram. Taa, Instagram abụghị naanị ngwá ọrụ maka ibipụta foto, kama ọ bụ ngwá ọrụ na-arụ ọrụ n'ezie nke nwere ọtụtụ nhọrọ, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe ọhụrụ ọ bụla.
Esi lelee akụkọ ihe mere eme na Instagram
Ndị mmepe na-elekọta ndị ọrụ Instagram na-agbakwụnye ihe ọhụrụ na-adọrọ mmasị nke na-eji ọrụ ahụ na ọkwa ọhụrụ. Karịsịa, ọtụtụ ọnwa gara aga, yana mmelite ọzọ nke ngwa ahụ, ndị ọrụ natara ihe ọhụrụ "Akụkọ". Taa, anyị ga elele anya esi ele akụkọ na Instagram.
Ntak apụghị m debanye aha maka Instagram
N'ihe dị iche iche nke netwọk mmekọrịta, Instagram na-apụta n'ụzọ doro anya - ọrụ na-ewu ewu maka iji bipụta foto na vidiyo, ịmepụta akụkọ ndị nwere onwe ha, mgbasa ozi, na ihe ndị ọzọ. A na-emepụta ndị ọrụ ọhụụ kwa ụbọchị na ndekọ aha ọhụrụ. Taa, anyị ga-elekwasị anya na nsogbu ahụ mgbe ọ gaghị ekwe omume ịmepụta profaịlụ ọhụrụ.
Ntak emi Instagram kpara
Instagram ruo ọtụtụ afọ na-aga n'ihu na-abụ otu n'ime ihe kachasị ngwa ngwa ebudatara ngwa maka ekwentị. N'ụzọ dị mwute, ndị ọrụ na - eme mkpesa banyere oge na - ezighị ezi. Karịsịa, taa, anyị ga-elebakwuo anya n'ihe ndị nwere ike imetụta ọpụpụ nke ngwa Instagram.
Esi tinye Instagram na kọmputa
Taa, a na-ele Instagram anya dị ka otu n'ime netwọk mmekọrịta ndị kasị ewu ewu n'ụwa nile. Ọrụ a na-enye gị ohere ibipụta obere foto na vidiyo, oge nke ndụ ya. N'okpuru ebe a, anyị ga-atụle otú e si wụnye Instagram na kọmputa gị. Ndị mmepe a na-elekọta mmadụ na-etinye ụmụ ha aka dịka ọrụ mmekọrịta ọha na eze maka ndị smartphones na-agba ọsọ iOS na usoro sistemụ arụmọrụ.
Esi kwusaa na Instagram
Ọ bụrụ na ị na-eji Instagram dị ka ụzọ iji bipụtara foto nkeonwe gị, ma dị ka ngwá ọrụ iji kwalite ngwaahịa, ọrụ, saịtị, mgbe ahụ, ị ​​ga-aghọta n'ezie na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ nwere ike ịmụta banyere profaịlụ gị maka ohere ịkwasa. Ndị ọrụ na-ebupụta ngwa ngwa Instagram na akara ihuenyo ha, dị ka a na-achị, na-amalite ile ndepụta mgbasa ozi, nke e si na ndepụta nke ndebanye aha.
Kedu esi zite ozi na Instagram site na kọmputa
Usoro 1: Tinye ihe na Instagram site na kọmpụta gị Ọ dị mma, ọ bụrụ na ịchọrọ izipu ozi na otu onye ọrụ site na nkwupụta, ị nwere ike ịnagide ọrụ a site na iji ngwa weebụ nke Instagram, nke dị maka iji na ihe nchọgharị ọ bụla. Gaa na ibe weebụ nke Instagram na, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nye ikikere.
Esi emeghe onye ọrụ na Instagram
Dị ka ọ bụla ọzọ na-elekọta mmadụ, Instagram nwere ọrụ nke igbochi akaụntụ. Usoro a na-enye gị ohere ichebe onwe gị site n'aka ndị ọrụ na-atụ egwu nke ị na-achọghị ịkọrọ foto nke ndụ gị. Isiokwu ahụ ga-atụle ọnọdụ dị iche - mgbe ịkwesịrị ịmeghee onye ọrụ ọrụ nchịkọta na mbụ.
Otu esi ele profaịlụ onwe na Instagram
Ọtụtụ nde ndị mmadụ gburugburu ụwa kwa ụbọchị na-ewepụta smartphones ha ma malite ngwa ngwa Instagram. Maka ọtụtụ ndị ọrụ, ọrụ a aghọwo otu n'ime netwọk mmekọrịta na-elekọta mmadụ ebe ị nwere ike ịkekọrịta oge kachasị ụtọ ma ọ bụ na-atọ ụtọ nke ndụ gị. Ma site na mgbe niile foto nke onye anyị nwere mmasị na anyị nwere ike ịhụ - mgbe mgbe a na-emechi peeji ahụ.
Etu akara onye ọrụ na foto na Instagram
Mgbe ị na-ezipụ foto gaa na Instagram, ndị enyi anyị na ndị maara anyị, ndị nwekwara ike ịbụ ndị ọrụ nke netwọk mmekọrịta a, na-ewere na foto. Ya mere, gịnị ma ị gwa onye ahụ nọ na foto ahụ? Ịtọ onye ọrụ na foto na-enye gị ohere itinye njikọ na foto ahụ na peeji nke profaịlụ a kapịrị ọnụ.
Otu esi achọ foto na Instagram hashtags
Iji mee mfe ọchụchọ maka foto ndị ọrụ, Instagram nwere ọrụ ọchụchọ maka hehtags (mkpado) nke egosipụtara na mbụ ma ọ bụ na nkwupụta. N'ihe nkowa banyere ọchụchọ maka hashtags, a ga-atụle ya n'okpuru ebe a. A hashtag bụ mkpado pụrụ iche agbakwunyere na ihe ntanetị iji kenye otu ụdị ya.
Maka ọtụtụ ndị ọrụ Instagram, onye ọrụ ọbụla ọ bụla bara uru, yabụ ọ bụrụ ihe ihere mgbe nọmba a malitere ibelata. N'oge a, enwere nghọta zuru oke na-achọpụta onye na-edeghị aha ya. Ọbụna mgbe enwere mmadụ iri ise na ndepụta ndepụta ndị mmadụ, ọ na-esiri ike mgbe ụfọdụ ịghọta kpọmkwem onye na-edeghị aha ya, ozi a agaghị arụ ọrụ na ngwaọrụ Instagram.
Otu esi ewepụ aha na ndị ọrụ Instagram
Onye ọrụ Instagram ọ bụla na-ekenye ngwa ahụ site n'oge ruo n'oge iji chọpụta ozi ọma ya site n'ịhụ posts nke ndị ọrụ ọ na-enyocha. N'ọnọdụ ahụ mgbe e mejupụtara teepu ahụ, ọ ga-adị mkpa iji wepu aha na profaịlụ na-enweghị isi. Onye ọ bụla n'ime anyị nwere profaịlụ ndenye aha nke na-adọrọ mmasị n'oge gara aga, ma ugbu a, ọ dị mkpa maka mkpa ha kpam kpam.
Esi eweputa foto na Instagram
Ebe ọ bụ na ọ na-esiri ike ịhụ nkọwa nke ihe oyiyi ahụ na Instagram na obere nza nke smartphones, ndị mmepe ngwa ngwa agbakwụnyere ike ịmepụta foto. Gụkwuo na isiokwu ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwelite foto na Instagram, ọ dịghị ihe ọ bụla siri ike na ọrụ a.